Jeegaanta? Maxaa ka run ah
Thursday November 30, 2017 - 19:44:27 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Isbahaysiga jeegaan oo soo shaac baxay xilligii doorashadii hore ee madaxtooyada 2010. Xilligaas oo ay ku heshiiyeen siyaasiinta laba beelood inay qabiil ahaan
Isbahaysiga jeegaan oo soo shaac baxay xilligii doorashadii hore ee madaxtooyada 2010. Xilligaas oo ay ku heshiiyeen siyaasiinta laba beelood inay qabiil ahaan isku gaashaanbuuraystaan. Labadaa beelood oo ahaa Habarjeclo iyo Sacad Muuse. Sida la sheego waxa lagu heshiiyay in doorkaa la soo saaro (loo codeeyo) Siilaanyo uuna xaq u leeyahay sida madaxwayne walba inuu laba jeer is sharraxo ( oo 2da goorba 2da beelood u codeeyaan), intaa wixii ka dambeeyana (2 goor) loo codeeyo Muusse. Siilaanyo caafimaadkiisa dartii mar labaad wuu isa soo sharrixi kari waayay.
Haddaba doorashadan 2017 jeegaantii ma hirgashay? Mase loo codeeyey sidii ballantu ahayd? Si kale haddaan u dhigo: Habarjeclo ma u codaysay Muuse?
Kadib markii natiijadu soo baxday ee xisbiyaduna soo bandhigeen tirada codadka ay ka heleen gobollada waxa caddaatay in deegaanada Habarjeclo uu xisbiga waddani ku guulaystay. Gobolada Togdheer iyo Sanaagba waxa ku guulaystay Waddani. Arrintu waa laba midkood:
1. In Habarjeclo ka baxday heshiiskii jeegaanta; ama
2. In labada gobolba lagaga badan yahay Habarjeclo.
Sidaa la xaqiijiyey Kulmiye wuxuu ku badiyey oo uu ka helay codad kor u dhaafay 90% deegaanada beesha musharraxa (madaxwaynaha la doortay). Deeganadaa oo ah Berbera, Gabiley iyo Hargaysa. Meesha qudha ee aan ahayn deegaankiisa ee Muuse ku guulaystay waa gobolka Sool oo uu woxoogaa dheeraaday Waddani. Dabcan gobollada kalena Kulmiye yuuna ku guulaysane haddana calafkiisa wuu ka qaatay oo cecelis ahaan 40% wuu ka helay.
Mar labaad su'aashii: ma jirtaa jeegaantii, mase loo codeeyey hab jeegaanaysan???